DEG DEG: Madaxweynaha Mareykanka oo Wiil Soomaali ah uu magacaabay la-taliye sare - Iftiin FM
DEG DEG: Madaxweynaha Mareykanka oo Wiil Soomaali ah uu magacaabay la-taliye sare
by Iftiin FM Reporter January 11, 2022
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Xamse Warfaa oo ah wiil Soomaaliyeed u magacaabay inuu noqdo la-taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka.
R/Wasaare Rooble oo manta gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Hay'adda Hanti Dhowrka ee dalka Mareykanka oo lacag dhan 1.4 bilyan oo doollar u diray dad mar hore dhintay.
RW Rooble oo khadka kula hadlay dhigiisa Qatar.
Morroco oo guul ku biloowday koobka qaramada Afrika, Maxa ka qaldamay Ghana?
Taageerayaasha horyaalka Premier League Oo Doortay Shaxda Ugu Fiican Ilaa Haatan Xilli Ciyaareedka
Dowladda Sacuudiga oo Safiir Cusub u soo magacaawday Soomaaliya
Askar ku eedeysan dil & Dhac oo maxakamadda la soo taagay .
Madaxweyne Biixi oo booqday dalka Itoobiiya